ကိုယ့်စတိုင်ကို လူတိုင်းငေးကြည့်စေဖို့.... - APANNPYAY
/ ကိုယ့်စတိုင်ကို လူတိုင်းငေးကြည့်စေဖို့....
မိန်းကလေးအများစုက အဝတ်အစားပေါပါတယ်။ အဝတ်တွေများတော့ ဘာဝတ်ရမလဲ စဉ်းစားရတာပေါ့။ မိန်းကလေးတွေ ဝတ်စရာမရှိတော့ဘူး ပြောရင် တကယ်က ရှိတာတွေအကုန်ဝတ်ပြီးသွားပြီလို့ ပြောတာပါ။ ကိုယ်ရှိတာလေးတွေထဲကမှ သူများတွေငေးကြည့်ရလောက်အောင် ဝတ်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
မဝတ်တတ်ရင် အောက်မှာကြည့်လိုက် 😀
1. မိမိဝတ်ချင်သည်ကို အရင်ရွေးပါ။
ဒီနေ့အတွက်က ဘာရောင်ဝတ်ချင်တာလဲ။ အစင်းဝတ်မှာလား။ အကွက်ဝတ်မှာလား။
ထူတာ ဝတ်ချင်တာလား။ ပါးတာဝတ်ချင်တာလား အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။
ဥပမာ ပန်းရောင်လေး ဝတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါမှမဟုတ် အဝါနဲ့အစိမ်းနုအစင်းလေး ရွေးမယ်ပေါ့။ ရာသီဥတုက အေးလာတော့ ဆွယ်တာသားထူထူလေး ဝတ်ချင်တာမျိုးပေါ့။
2. ဘာဝတ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
ဝတ်တာက နှစ်ပိုင်းပေါ့။ အပေါ်နဲ့အောက် သေချာလေးရွေးပါ။ အပေါ်ဆိုလည်း တီရှပ်ဝတ်မလား။ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်မလား။ blouse ဝတ်မလား ရွေးရပါမယ်။ ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ရွေးထားတာက ဂျင်းနဲ့ လိုက်မလား။ စကပ်တိုနဲ့လိုက်မလား ထပ်ရွေးပါ။ အပေါ်နဲ့အောက် လိုက်ဖက်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်သွားပါမယ်။
အပေါ်က ပဝါလေးပတ်မလား။ ဂျာကင်လေးထပ်ဝတ်ရင် လှမလား။ ကုတ်အင်္ကျီ ခါးတိုလေးနဲ့လိုက်မလား ရွေးပါ။ ဒီအဆင့်ကတော့ ကျော်သွားလည်းရပါတယ်။ အပေါ်တစ်ချက်မှာ ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်ပေါ့။
အင်္ကျီလည်ပင်းကျယ်တာလေးဆို ဆွဲကြိုးကြီးကြီး ဆွဲတာမျိုး အပေါ်ရောအောက်ရော ဗြောင်ဖြစ်နေရင် ခါးပတ်လှလှပတ်လိုက်တာမျိုးတွေက စတိုင်ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်ကိုင်မယ့်အိတ်နဲ့ စီးမယ့်ဖိနပ်ကိုလည်း သေချာရွေးပါ။
အားလုံးလိုက်ဖက်ပြီဆိုရင်တော့ အပြင်မှာ ဖလန်းဖလန်းထဖို့ အလန်းဇယားလေး ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။
မိနျးကလေးအမြားစုက အဝတျအစားပေါပါတယျ။ အဝတျတှမြေားတော့ ဘာဝတျရမလဲ စဉျးစားရတာပေါ့။ မိနျးကလေးတှေ ဝတျစရာမရှိတော့ဘူး ပွောရငျ တကယျက ရှိတာတှအေကုနျဝတျပွီးသှားပွီလို့ ပွောတာပါ။ ကိုယျရှိတာလေးတှထေဲကမှ သူမြားတှငေေးကွညျ့ရလောကျအောငျ ဝတျတတျဖို့တော့ လိုတယျနျော။
မဝတျတတျရငျ အောကျမှာကွညျ့လိုကျ 😀
1. မိမိဝတျခငျြသညျကို အရငျရှေးပါ။
ဒီနအေ့တှကျက ဘာရောငျဝတျခငျြတာလဲ။ အစငျးဝတျမှာလား။ အကှကျဝတျမှာလား။
ထူတာ ဝတျခငျြတာလား။ ပါးတာဝတျခငျြတာလား အရငျစဉျးစားလိုကျပါ။
ဥပမာ ပနျးရောငျလေး ဝတျခငျြတယျဆိုပါစို့။ ဒါမှမဟုတျ အဝါနဲ့အစိမျးနုအစငျးလေး ရှေးမယျပေါ့။ ရာသီဥတုက အေးလာတော့ ဆှယျတာသားထူထူလေး ဝတျခငျြတာမြိုးပေါ့။
2. ဘာဝတျမလဲဆိုတာ စဉျးစားပါ။
ဝတျတာက နှဈပိုငျးပေါ့။ အပျေါနဲ့အောကျ သခြောလေးရှေးပါ။ အပျေါဆိုလညျး တီရှပျဝတျမလား။ ရှပျအကငြ်္ီဝတျမလား။ blouse ဝတျမလား ရှေးရပါမယျ။ ရှေးလိုကျပွီဆိုရငျ ကိုယျရှေးထားတာက ဂငျြးနဲ့ လိုကျမလား။ စကပျတိုနဲ့လိုကျမလား ထပျရှေးပါ။ အပျေါနဲ့အောကျ လိုကျဖကျပွီဆိုရငျ နောကျတဈဆငျ့သှားပါမယျ။
အပျေါက ပဝါလေးပတျမလား။ ဂြာကငျလေးထပျဝတျရငျ လှမလား။ ကုတျအကငြ်္ီ ခါးတိုလေးနဲ့လိုကျမလား ရှေးပါ။ ဒီအဆငျ့ကတော့ ကြျောသှားလညျးရပါတယျ။ အပျေါတဈခကျြမှာ ပွညျ့စုံနပွေီဆိုရငျပေါ့။
အကငြ်္ီလညျပငျးကယျြတာလေးဆို ဆှဲကွိုးကွီးကွီး ဆှဲတာမြိုး အပျေါရောအောကျရော ဗွောငျဖွဈနရေငျ ခါးပတျလှလှပတျလိုကျတာမြိုးတှကေ စတိုငျကစြပေါတယျ။ ကိုယျကိုငျမယျ့အိတျနဲ့ စီးမယျ့ဖိနပျကိုလညျး သခြောရှေးပါ။
အားလုံးလိုကျဖကျပွီဆိုရငျတော့ အပွငျမှာ ဖလနျးဖလနျးထဖို့ အလနျးဇယားလေး ဖွဈသှားပွီပေါ့နျော။